ज्ञानेन्द्रको १५ महिने शासनः दलहरुको कमजोरीले | Radio Makalu 102.1 MHz Websoft University
ज्ञानेन्द्रको १५ महिने शासनः दलहरुको कमजोरीले
काठमाडौ , माघ २० गते । जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई निर्वाचन गराउन असफल भएको आरोप लगाएर अपदस्थ गरी आफैंले सरकारको नेतृत्व गरेका तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र शाहले आफ्नो प्रत्यक्ष शासन १५ महिनाभन्दा टिकाउन सकेनन् ।
१२ बुँदे समझदारी गराउन संसदीय दल र माओवादीबीच सूत्राधारको काम गरेका सत्तारुढ माओवादी केन्द्रका वरिष्ठ नेता नारायणकाजी श्रेष्ठ माघ १९ को घटनाबारे धेरै बोल्न चाहँदैनन् । उनले अन्नपूर्णसँग भने, ‘नेपाली जनताले संघर्ष गरेर प्राप्त गरेको सीमित अधिकारलाई पनि राजाले अपहरण गरेको दिन हो माघ १९ । त्यो नकारात्मक परिघटनाको स्थिति नेपाली समाजमा अझै पनि छँदै छ ।'
राजनीतिक दल सत्ताकेन्द्रित र अलोकप्रिय भएको मौका छोपेर तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले सत्ता हत्याए तर जनजीवनमा परिवर्तन ल्याउनसक्ने नीति, योजना बनाउन नसक्दा उनी आफैं असफल भए ।
राजनीतिक दल सत्ताकेन्द्रित बनेको मौका छोपेर राजाले प्रतिगमन गरेका थिए', ज्ञवालीले अन्नपूर्णसँग भने, ‘पार्टीहरू कमजोरी स्विकार्दै अगाडि बढे, माओवादीले पनि उग्रवामपन्थी गतिविधि छोडेर आउन चाह्यो, त्यसैले राजतन्त्र ढल्ने स्थिति बन्यो । यसबाट सबै पक्षले गम्भीर शिक्षा लिनुपर्छ ।'
माघ १९ को शाही कदमलाई आलोच्य र गलत मान्ने राजनीतिक विश्लेषक केशवप्रसाद भट्टराईका अनुसार त्यो घटनाको वस्तुनिष्ठ अध्ययन र समीक्षा गरिनुपर्छ । ‘राजाले आफ्नो हातमा सत्ता लिएको अवस्थामा भन्दा मुलुक बलियो भएको छ ? राष्ट्रिय एकता र अखण्डता सुदृढ भएको छ ? जनता सन्तुष्ट र खुसी छन् ? राज्य व्यवस्थाप्रति जनविश्वास बढेको छ ? अर्थतन्त्रको अवस्था गतिलो छ ? जनताले आधारभूत सेवा सजिलै पाएका छन् ? ', भट्टराईले सामाजिक सञ्जालमा प्रश्न गरेका छन् ।
पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र र राजनीतिक दलको लुकामारी अहिले पनि चलिरहेको छ । दलहरू अलोकप्रिय बन्दै गर्दा राजाले टाउको उठाउनसक्ने सम्भावना ०६१ माघ १९ को घटनाले देखाएकै छ । - रेवती सापकोटा , अन्नपूर्ण पोस्टबाट